အမျိုးသမီးများတကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက် လွန်စွာ အရေးကြီး လို့ရှက်စရာ လို့ မယူဆ ဘဲ ကျန်း မာရေးအတွက် ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်သွားပါနော် – Shwewiki.com
အ မျိုး သမီး ထု တကိုယ်ရေးသန်ရှင်းကျမ္မာရေးအတွက် လွန်စွာအရေးကြီးလို့ရှက်စရာလို့ မယူဆဘဲ၊ဒီသတင်းကို မိမိရဲ့မိတ်ဆွေ၊ အပေါင်းအသင်းများအား ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန်မျှဝေအသိပေးကြပါ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကာလကတ္တားရှိ Tata Cancer Hospital(ခေါ်)ကင်ဆာဆေးရုံ မှ အမျိုးသမီးများအတွက် ကျမ္မာရေးအသိပေးနှိုး ဆော်ထားချက်ကို မျှဝေလိုက်ပါရစေ။
အဲဒီဆေးရုံမှာ သားအိမ်ကင်ဆာ၊ ဆီးအိမ်ကင်ဆာတို့ ဖြင့်လာရောက်ကုသမှုခံနေကြတဲ့ အမျိုးသမီးဝေဒနာရှင်များကို ဆေးမှတ်တမ်းပြုစု၍ရောဂါရာဇ၀င်ကိုလေ့လာစမ်းစစ်တဲ့အခါမှာ၊ ထိုကင်ဆာဝေဒနာသည်အများစု ဟာ ဓမ္မတာရာသီလာတဲ့အခါ pad(ခေါ်)လစဉ်သုံးပစ္စည်းကို အတွင်းခံဘောင်းဘီမှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာထားပြီး၊ တော်တော်နဲ့အသစ်လဲလေ့မရှိခဲ့ကြတာကို အဖြေရှာတွေ့ ခဲ့ပါတယ် … ။
ရာသီသွေးဆင်းတဲ့အခါ အတွင်းခံဘောင်းဘီမှာ ကပ်ထားတဲ့pad(ခေါ်)လစဉ်သုံးပစ္စည်း က အပြင်အ၀တ်အထည်တွေကို မစွန်း ထင်းစေဖို့စုပ်ယူထိန်းထားပေးလေ့ရှိပါတယ် … ။ pad တွေကို ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ ဖန်တီးပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်သာ၊ အခုလို ရာသီသွေးရည်များနဲ့အစိုဓာတ်ကို အချိန်ကြာကြာ စုပ်ယူုထိန်းထားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။
ဒါပေမယ့်အချိန်တော်တော်ကြာ စုပ်ယူပြီးနောက် မှာတော့ padမှာပါတဲ့ဓာတုပစ္စည်းများပျက်ပြယ်ကာ အထဲမှာစုပ်ယူထိန်းပေးထားတဲ့သွေးပုပ်များကိုဓာတ်ပြောင်းလဲစေပြီး၊ အနီရောင်မှ အစိမ်းရောင်မှိုဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ … ။
ထိုမှိုများက ယောနိလမ်းကြောင်းမှတဆင့် သားအိမ်လမ်းကြောင်းနဲ့ဆီးလမ်းကြောင်းတလျှောက် ပျံ့နှံ့ သွားကာ၊ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဆီးအိမ်နဲ့ သားအိမ်တို့ကို ကင်ဆာဖြစ်လာစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် pad ကိုအတွင်းခံမှာအကြာကြီးမထားဘဲ ၅-နာရီကြာတိုင်း အသစ်လဲပေးပါလို့Tata Cancer Hospital ကအကြံပြုထားပါတယ် … ။
၄င်း လစဉ်သုံးပစ္စည်းများသာမက၊ daily use(ခေါ်)နေ့ စဉ်သုံး ကပ်ခွာပစ္စည်း တွေကိုလည်း ၅-နာရီကြာသုံးပြီးတိုင်းအသစ်လဲလှယ် ပေးသင့်ပါတယ်တဲ့နော် … ။
၂၀၁၃ခုနှစ်၊ Tata Cancer Hospital ရဲ့မှတ်တမ်းအရ၊ pad တစ်ခုတည်းကိုအချိန်ကြာကြာသုံးစွဲခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖော်ပြပါ ကင် ဆာရောဂါများနဲ့ ကွယ်လွန်သူအမျိုးသမီးဦးရေမှာ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလလယ်အထိ ၅၆ ဦးရှိနေပါပြီတဲ့ … ။
ဒါကြောင့် အမျိုး သမီးထု တကိုယ်ရေးသန့်ရှင်းကျမ္မာရေးအတွက် လွန်စွာအရေးကြီးလို့ရှက်စရာလို့ မယူဆဘဲ၊ဒီသတင်းကို မိမိရဲ့မိတ်ဆွေ၊ အပေါင်းအသင်းများအား ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့်မျှဝေ အသိပေးပါလို့ ကင်ဆာဆေးရုံမှ ထပ်လောင်းအကြံပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် …. ။
မူရင်းတင်သူအားလေးစားစွာဖြင့် ခရစ်ဒစ်ပေးပါသည် … ။
အမြိုးသမီးမြားတကိုယျရသေနျ့ရှငျးရေးအတှကျ လှနျစှာအရေးကွီးလို့ရှကျစရာလို့ မယူဆဘဲ ကနျြးမာရေးအတှကျ ဖတျဖွဈအောငျဖတျသှားပါနျော
(အမြိုး သမီးထု တကိုယျရေးသနျရှငျးကမ်ြမာရေးအတှကျ လှနျစှာအရေးကွီးလို့ရှကျစရာလို့ မယူဆဘဲ၊ဒီသတငျးကို မိမိရဲ့မိတျဆှေ၊ အပေါငျးအသငျးမြားအား ကယျြကယျြပွနျ့ ပွနျမြှဝအေသိပေးကွပါ)
အဲဒီဆေးရုံမှာ သားအိမျကငျဆာ၊ ဆီးအိမျကငျဆာတို့ ဖွငျ့လာရောကျကုသမှုခံနကွေတဲ့ အမြိုးသမီးဝဒေနာရှငျမြားကို ဆေးမှတျတမျးပွုစု၍ရောဂါရာဇဝငျကိုလလေ့ာစမျးစဈတဲ့အခါမှာ၊ ထိုကငျဆာဝဒေနာသညျအမြားစု ဟာ ဓမ်မတာရာသီလာတဲ့အခါ pad(ချေါ)လစဉျသုံးပစ်စညျးကို အတှငျးခံဘောငျးဘီမှာ အခြိနျကွာမွငျ့စှာထားပွီး၊ တျောတျောနဲ့အသဈလဲလမေ့ရှိခဲ့ကွတာကို အဖွရှောတှေ့ ခဲ့ပါတယျ … ။
ရာသီသှေးဆငျးတဲ့အခါ အတှငျးခံဘောငျးဘီမှာ ကပျထားတဲ့pad(ချေါ)လစဉျသုံးပစ်စညျး က အပွငျအဝတျအထညျတှကေို မစှနျး ထငျးစဖေို့စုပျယူထိနျးထားပေးလရှေိ့ပါတယျ … ။ pad တှကေို ဓာတုပစ်စညျးတှနေဲ ဖနျတီးပွုလုပျထားခွငျးကွောငျ့သာ၊ အခုလို ရာသီသှေးရညျမြားနဲ့အစိုဓာတျကို အခြိနျကွာကွာ စုပျယူုထိနျးထားနိုငျတာပဲဖွဈပါတယျ … ။
ဒါပမေယျ့အခြိနျတျောတျောကွာ စုပျယူပွီးနောကျ မှာတော့ padမှာပါတဲ့ဓာတုပစ်စညျးမြားပကျြပွယျကာ အထဲမှာစုပျယူထိနျးပေးထားတဲ့သှေးပုပျမြားကိုဓာတျပွောငျးလဲစပွေီး၊ အနီရောငျမှ အစိမျးရောငျမျှိုဖွဈသှားပါတော့တယျ။ … ။
ထိုမှိုမြားက ယောနိလမျးကွောငျးမှတဆငျ့ သားအိမျလမျးကွောငျးနဲ့ဆီးလမျးကွောငျးတလြှောကျ ပြံ့နှံ့ သှားကာ၊ နောကျဆုံးမှာတော့ ဆီးအိမျနဲ့ သားအိမျတို့ကို ကငျဆာဖွဈလာစပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ pad ကိုအတှငျးခံမှာအကွာကွီးမထားဘဲ ၅-နာရီကွာတျိုငျး အသဈလဲပေးပါလို့Tata Cancer Hospital ကအကွံပွုထားပါတယျ … ။
၄ငျး လစဉျသုံးပစ်စညျးမြားသာမက၊ daily use(ချေါ)နေ့ စဉျသုံး ကပျခှာပစ်စညျး တှကေိုလညျး ၅-နာရီကွာသုံးပွီးတိုငျးအသဈလဲလှယျ ပေးသငျ့ပါတယျတဲ့နျော … ။
၂၀၁၃ခုနှဈ၊ Tata Cancer Hospital ရဲ့မှတျတမျးအရ၊ pad တဈခုတညျးကိုအခြိနျကွာကွာသုံးစှဲခဲ့ခွငျးကွောငျ့ ဖျောပွပါ ကငျ ဆာရောဂါမြားနဲ့ ကှယျလှနျသူအမြိုးသမီးဦးရမှော ၂၀၁၃ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလလယျအထိ ၅၆ ဦးရှိနပေါပွီတဲ့ … ။
ဒါကွောငျ့ အမြိုး သမီးထု တကိုယျရေးသနျ့ရှငျးကမ်ြမာရေးအတှကျ လှနျစှာအရေးကွီးလို့ရှကျစရာလို့ မယူဆဘဲ၊ဒီသတငျးကို မိမိရဲ့မိတျဆှေ၊ အပေါငျးအသငျးမြားအား ကယျြကယျြပွနျ့ ပွနျ့မြှဝေ အသိပေးပါလို့ ကငျဆာဆေးရုံမှ ထပျလောငျးအကွံပွုထားတာပဲဖွဈပါတယျ …. ။
အ သက် ၁၆ နှစ် မှ ၂၄ နှစ်အ တွင်း မိန်းကလေး များ ဖတ်ဖို့ ပါ